တစ်ဦးကား Bangkok ငှားရမ်း | တစ်ဦးကားကလပ်ငှားရမ်း
Bangkok ကားတစ်စီးငှားရမ်း Bangkok
ဘန်ကောက်တစ်ဂုဏ်သိက္ခာရှိတဲ့ခရီးသွားဧည့်ဦးတည်ရာအဖြစ်သူ့ဟာသူ hasdistinguished ။ အဆိုပါမြို့ထိုင်းနိုင်ငံဌာနေတိုင်းရင်းသားလူမျိုး၏ကြွယ်ဝသောယဉ်ကျေးမှုသို့ offersinsight ။ ဤသည် waterfrontdistrict အနည်းငယ်စျေးဝယ်အတွက်လုပ်ကြဖို့အဓိပ္ပါယ်ရှိသောဘာသာရေးက်ဘ်ဆိုက်များ, fantasticrestaurants နှင့်မယုံနိုင်စရာဈေးကိုရှာဖွေတဲ့အကြီးအနေရာတစ်ခုဖြစ်ပါသည်။
thisvibrant မြို့သွားရောက်လည်ပတ်လှပသောဗိသုကာနှင့်ယဉ်ကျေးမှုကားတစ်စီးငှားဖို့ဖြစ်ပါတယ် inthe ယူသောအရာကိုတစ်ဦးတစ်ချိန်ကတစ်သက်တာအခွင့်အလမ်းနှင့်အကောင်းဆုံးဖြစ်ပါတယ်။ ဒီ option ကသင့်ရဲ့ကိုယ်ပိုင်နှုန်းထားမှာစူးစမ်းရန်သင့်လွတ်လပ်ခွင့်ကိုကန့်သတ်မရ upyour options များဖွင့်လှစ်။ က Short termor ရေရှည်ငှားသင် tuk-tuks နှင့်ဘတ်စ်ကား၏လုပ်ရတဲ့သင်တို့ကဲ့သို့မဟုတ်ရင်ကုန်ရပြီမယ်လို့ themoney ကယ်တင်တော်မူ၏။
လုံလောက်အောင်ကံကောင်းတဲ့ကားတစ်စီးန်ဆောင်မှုကိုငှားရာပူဇော်သက္ကာကိုဈေးကွက်ထဲမှာအသစ်တခုကစားသမားလည်းမရှိ။ Rentacar တစ် peer-to thecar ၏ပိုင်ရှင်နှင့်တစ်ဦးချင်းစီငှားအကြားအဆက်အသွယ်ခွင့်ပြုငှားရမ်းခြင်းကုမ္ပဏီ -peer Clubis ။ သငျသညျမိသားစုကလိုက်ပါသွားတစ်ဦးချင်းခရီးသွား, ဒါမှမဟုတ်တစ်ဦးကိုယူပြီးအုပ်စုတစ်စုအားလပ်ရက်များမှာပဲဖြစ်ဖြစ်, သင့်အကြိုက်ညီဆုံးနေ့စွဲအရွယ်အစားနှင့်စတိုင်တစ်ခုရွေးချယ်မှုနှင့်အတူကမ်းလှမ်းခဲ့သည်ကျယ်ပြန့် ofmodels ရှိသေး၏။
thebooking လုပ်ငန်းစဉ်နှင့် ပတ်သက်. သွားကြဖို့ကိုဘယ်လို
အဆိုပါ RentacarClub က်ဘ်ဆိုက်ဝင်ရောက်ကြည့်ရှုခြင်းနှင့်အလွယ်တကူဝင်ပါ။ အဆိုပါ interface တွင် carowners နှင့်ငှားရမ်းနှစ်ဦးစလုံးအတွက်အသုံးပြုရန်လွယ်ကူသည်။ သငျသညျ acar ပိုင်ရှင်သို့မဟုတ်ငှားရမ်းစိတ်ဝင်စားတစ်စုံတစ်ဦးအဖြစ်ရှိပါတယ်ရှိမရှိညွှန်ပြနေတဲ့အသုံးပြုသူပရိုဖိုင်ကိုဖန်တီးပါ။ သင်တို့သည်လည်းရိုးရိုးသင်တို့အပေါ်မှာက iPhone သို့မဟုတ် Apple က iOS app theandroid app ကို download လုပ်ပါနှင့်လျင်မြန်စွာ site ပေါ်တွင် required.New အသုံးပြုသူများသည်တည်နေရာ, ကုန်ကျစရိတ်, မော်ဒယ် andfeatures ကနေတဆင့်ကားများထွက်ရှာနိုင်ခဲ့တွေဘာတွေရှိတယ်ဆိုတာထွက်ခံစားရနိုင်ပါတယ်။ အဆိုပါကလပ်လိုအပ်ပါတယ်:
ပြဌာန်းချက်ဘန်ကောက်ဖို့မကြာခဏဧည့်သည်များအတွက်နေရာအရပ်၌ထားပါပြီ။ ငှားနှင့်အတူတစ်ဦးကမြန်မြန်ဆန်ဆန်စစ်ဆေးမှုများကားတစ်စီးကလပ်ဝန်ဆောင်မှုနိုင်ပါတယ်ချောမွေ့ပုံကိုအတည်ပြု။ အဘယ်မျှကာလပတ်လုံး youintend ကားကိုစောင့်ရှောက်ခြင်းအပေါ်ပေါ် မူတည်. တစ်ဦး quotation အသငျသညျကိုကမ်းလှမ်းလျက်ရှိသည်သောအရာကိုတစ်ဦးအကျဉ်းချုပ်အားဖြင့်သင်တို့ကိုမှကာကှယျမှုရယူလိမ့်မည်။
အတိအကျကိုလမ်းထဲကတူးယူနေကြပြီးနောက်, သင်နှင့်ပိုင်ရှင်တက်နှင့်စစ်ဆေးရေးပြီးနောက်တွေ့ဆုံရန်, သင်သော့ပေးအပ်လျက်ရှိသည်။
အဘယ်ကြောင့် Rentacar ကလပ်န်ဆောင်မှုများအဘို့အသွား
Rentacar ကလပ်အတွက်ငှားရမ်းကားတစ်စီးစက်မှုလုပ်ငန်းအတွက်တွေဟာလည်းအသစ်နှင့် themodern စျေးကွက်အရပျလိုအပ်ကြောင်းဖြည့်ဆည်းဖို့ဒီဇိုင်းပြုလုပ်ထားသည်။ အဆိုပါကုမ္ပဏီ rentingmeet တက်စိတ်ဝင်စား site ကိုကားပိုင်ရှင်များနှင့်လူတွေသွားလာနှင့်လွတ်လပ်စွာအပြန်အလှန်၎င်းတို့၏လွယ်ကူသော system.On ငှားရမ်းတဲ့ peer- to- သက်တူရွယ်တူဖန်တီးထားသည်။ အဆိုပါဒေတာဘေ့စပိုပြီးလက်တွေ့ကျတဲ့မိသားစုကား flashiercars ကနေပိုမိုကျယ်ပြန်ရွေးချယ်ရေးရှိပါတယ်။
Rentacarclub ဖန်တီးထားပြီးအဆိုပါစနစ်လုပ်ငန်းစဉ်တစ်ခုလုံးပိုပြီးပုဂ္ဂိုလ်ရေးစေသည်နှင့်ကားများ non-peer-to-peer ငှားရမ်းသည့်ကုမ္ပဏီများထက် moreaffordable နှင့်ကောင်းစွာထိန်းသိမ်းထားကြသည်။
ယင်း၏ပိုင်ရှင်ထံမှ issafe နှင့်အာမခံထားတဲ့ကားငှားခြင်းနှင့်ဘန်ကောက်တစ်ခုအံ့သြဖွယ်အချိန်ရှိသည်; အရှေ့တောင်အာရှ၏ thetourist အာရုံကြော-စင်တာ။